Tsy ho lany bateria mihitsy ianao amin'ity 20.100 mAh powerbank ity [Review] | Vaovao momba ny gadget
Tsy ho lany bateria mihitsy ianao amin'ity powerbank 20.100 mAh ity [Review]
Miaina ao anatin'ny vanim-potoana mifandray maharitra isika, ary tsy izany ihany, fa ny bateria amin'ireo fitaovana ireo izay mila fifandraisana maharitra dia tsy ampy. Io no fahitana lehibe manaraka ny fotoanantsika, andro ahafahantsika mankafy bateria ho an'ny fitaovana finday izay manome fahaleovan-tena tena mahaliana, avy eo isika vao afaka miala amin'ny tariby. Na izany aza, mbola manana fomba hafa mahaliana amin'ny tsiro rehetra izahay, izany no noeritreretin'i Dodocool hamoahana ity bateria tsy azo aleha ity.
Raha manana ny vokatra hodinihinay ianao dia ho very ny fotoana rehetra hampiasana fialan-tsiny efa lany bateria, ary izany dia Ny 20.100 mAh dia manome tolotra famahanana toa vitsy eny an-tsena, andao jerena akaiky kokoa izany amin'ity vokatra ity dia tena hafahafa saingy tsy tokony ho very ao anaty kitapom-bolan'ny maro izany.
Hanao ny antsipiriany rehetra ianao mba hahafahanao mandinika raha tena mendrika izany ny vokatra misy an'io halehibe io na tsia. Ary tsy miatrika powerbank izahay, satria miaraka amin'izany dia ho azonao atao ny mampiditra vokatra manana habe be dia be, miresaka momba ny solosaina finday misy fifandraisana USB-C amin'ireo fitaovana hafa isika, andao hankany.
1 Volavola sy fitaovana: Sobriety sy fanoherana
2 Toetra ara-teknika: fahaiza-manao avo sy fahaiza-manao
3 Mampiasà traikefa: bateria fanampiny, tsy fisian'ny fampiononana
Volavola sy fitaovana: Sobriety sy fanoherana
Eto i Dodocool dia tsy te hiditra amin'ny tanety feno honahona, tsy misy toa ny akora manana kalita voaporofo sy endrika mahonon-tena. Izay no ho hitantsika amin'ny amponga. Amin'ny ankapobeny dia miorina amin'ny aliminioma ny fotony, amin'ity tranga ity dia tian'izy ireo ny hanome azy loko mainty izay mahatonga azy io ho matotra, Na dia tsy nety ho ratsy aza ny kinova volafotsy tanteraka, na dia heveriko aza fa hampifanohitra kokoa amin'ny sisiny. Amin'ny iray amin'ireo lafiny ireo dia nametra ny tenany hametraka ny sary famantarana ny marika amin'ny volondavenona izy ireo, fa ny lafiny iray kosa dia ho an'ny toetra, fahaiza-manao ary ny tombo-kase azo antoka mifanaraka amin'ny vokatra.
Mandritra izany fotoana izany, amin'ny lafiny ankavanana, natsangana tamin'ny plastika, tsy manana na inona na inona isika, azontsika raisina ho toy ny fototry ny bateria. Etsy ankilany, Eo amin'ny ilany havia dia manana seranana USB mahazatra roa isika ary seranan-tsambo USB-C koa eo amin'ny fitoeran-plastika mainty izay mifanaraka amin'ny ambin'ny vokatra napetraka. Amin'ny fikitika kely fotsiny dia manome antsika fahatsapana kalitao ny powerbank, amin'ny fotoana itranganay vokatra iray manana habe be dia be, manokana manana lanjan'ny 621g, izay saika hanery antsika hitondra azy amin'ny kitapom-batsy hatrany, noho ny refy: 19 x 6,5 x 1,5 cm, izay lojika raha jerena ny fahaizany.
Toetra ara-teknika: fahaiza-manao avo sy fahaiza-manao
Ny tena misongadina indrindra amin'ny zava-drehetra dia ny fahafahan'ny fifandraisana USB-C manolotra antsika, ampiarahina amin'ny tariby izay manome antsika fahatsapana kalitao (manodidina ny 25 santimetatra eo ho eo). Etsy ankilany, manana fifandraisana roa isika USB-A misy fivoahana avo indrindra amin'ny 2,4 A, miaraka amin'ny tombo-kasen'ny teknolojia Smart AIQ, kinova "fast charge" mitovy amin'ny an'ny charger iPad, izay manana fanamarinana ny fepetra fiarovana mba tsy hiasa be ny fitaovantsika ary koa manakana ny fahasimban'ny fiandohan'ny bateria, zavatra mahazatra rehefa tsy mampiasa charger de qualité isika.
Mikasika ny fifandraisana USB-C anao, lamaody tokoa amin'izao andro izao, dia manisa ihany koa miaraka amin'ny fenitra USB PD, ary ve ireo karazana fitaovana izay halaintsika entina dia mety ho marefo alohan'ity karazana vokatra ity. Amin'izany fomba izany, ny Powerbank Dodocool dia afaka manome famerana haingana amin'ny fitaovantsika. (hatramin'ny 45W) amin'ireo izay mifanaraka, mazava ho azy. Tsy isalasalana fa miatrika batery mahavita zavatra marobe isika.
Ny fizarana mamaritra eto, tsy isalasalana, no fahaizany. Tsy hahita zavatra hafa mihoatra ny 21.000 mAh isika, izay ahafahantsika mameno na dia ny solosaina finday misy fifandraisana USB-C aza, raha ny marina, afaka mamaky telefaona sy solosaina finday miaraka amin'izay isika nefa tsy mitandrina.
Fampidirana USB-C misy 5V amin'ny 3A, 9V amin'ny 2A, 14,5V amin'ny 1,5A, na 20V amin'ny 1,5A
Output USB-C misy 5V amin'ny 3A, 9V amin'ny 3A, 14,5V amin'ny 3A ary 20V amin'ny 2,25A
Mampiasà traikefa: bateria fanampiny, tsy fisian'ny fampiononana
Raha ny filazan'i Dodocool, raha mampiasa ny seranan-tsambo USB-C isika dia afaka mameno an'ity bateria ity ao anatin'ny telo ora, eny, mitaky mpampitohy rindrina mifanaraka amin'ny tariby USB-C izany raha te hahazo ireo valiny ireo. Mazava fa 21.000 mAh tonga amin'ny rendrarendra, solosaina finday misy fifandraisana USB-C ary mahazaka vola 6.000 mAh ao anatin'ny 3 ora sy 30 minitra, noho izany dia heverinay fa mandeha haingana tahaka izao ny herinaratra, raha afaka miresaka momba ny hafainganana isika. Vokatra havaozina ary vonona ny hanafaka ireo izay tena mila izany amin'ny olana. Raha ny telefaona finday toy ny iPhone dia mitovy amin'ny fotoanan'ny charger iPad izy io.
Ao anaty fonosana, tsotra dia tsotra, zavatra izay mampiavaka an'i Dodocool matetika ary amin'ny toa ny orinasa sinoa hafa toa an'i Aukey, dia mahita tariby roa izahay, ilay USB-C voalaza etsy ambony ary microUSB somary fohy ary izay tsy fantatsika ny antony misy azy ankehitriny maninona no feno, satria ity bateria Dodocool ity dia tsy ampiakarina amin'ny alàlan'ny microUSB, fa amin'ny alàlan'ny USB-C. Ao amin'ity fizarana ity Tokony ho feno fankasitrahana bebe kokoa izahay amin'ny microUSB mankany USB-C na USB-C mankany adapter USB-A amin'izay ireo mpampiasa izay mampiasa fitaovana Apple dia afaka manararaotra ny fahaizany ihany koa. na tsy manana charger USB-C fotsiny izahay. Fihetsika somary hafahafa, eritreretinay fa fanomezana bebe kokoa io.
Ankoatr'izay, ahoana no mety hitranga raha tsy amin'ny banky herin'ireo toetra ireo, mahita famantarana LED momba ny fizakan-tena sisa tavela isika ary ny tsirairay dia maneho ny 25% eo ho eo., hovelomina izy ireo rehefa tsindrio ny bokotra iray izay eo akaikin'ny USB-A mameno.
€58 a €60
Batterie 20.100 mAh Dodocool
Mazava ny karazana vokatra ananantsika eo imasontsika, bateria tsy mety amin'ny karazana mpampiasa na ho an'ny vokatra rehetra, ho an'ireo be fangatahana indrindra sy ho an'ireo izay tena mila zavatra toa izany, Tsy misy vokatra.Na izany aza, manana tolotra manokana ho an'ny mpamaky izahay anio, a 40% fihenam-bidy raha mividy azy amin'ny kaody ianao: XKAJPE9A, aza adino ny tolotra omena anao.
Raha mazava ny zavatra tadiavinao, raha mila fahaleovan-tena, kalitao, famahanana haingana ary USB-C ianao, io no baterinao, satria tsy azontsika atao ny mampifanaraka azy amin'ny vidiny amin'ny hafa amin'ny fifaninanana.
Tsy misy mpampita adapter
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Tsy ho lany bateria mihitsy ianao amin'ity powerbank 20.100 mAh ity [Review]
Samsung dia manomboka manamboatra fitaovana ho an'ny fitrandrahana cryptocurrency
Taona tsara 2017 ho an'ny fandoavana contactless any Espana ny 45: XNUMX% n'ny mpampiasa